अराजक शब्दहरु: February 2012
फेसबुक स्ट्याटस संग्रह
• ए बाबा ! तिम्ले जानेका छौ । राम्रो भो । मलाई पनी सिकाउ झनै राम्रो पो हुन्छ त !! ख्वै कुरो बुझ्या
• म चिन्दिन । तिमी पक्का चिन्दछौ भने म प्रयास नै नगर्ने मान्छे चै हुँदै होईन !!
• कारण र कारकहरु फरक छन् तर हतियार उही बन्द । कान थुनेर बसेकाको कानमै नपड्किकन केही नहुने हाम्रो संस्कृती नै हो । खच्चडो (Hybrid) आर्थिक नीतिको यौटा नतिजा भनेकै नेतृत्व तहकाहरुको अन्यौलग्रस्त धारणा र सोँच नै त हो
• बन्दका सकारात्मक (न्यून महत्वका नै किन नहुन) पाटा पनि प्रशस्त छन् । जस्तै कलमधारी, क्यामराधारी, एनजिओधारीहरुलाई एक्सपोजरको अवसर, बोसो स्टकमा हुनेलाई बगाउने अवसर, साधनको प्रयोग बिनाको जिन्दगी अनुभुत हुने अवसर, सधैको पढाई र ड्यटीबाट आजित भएकालाई राहत, सडक पेटीमा सरसामानको विक्रिमा वृद्धि, तरकारी पसलेलाई अतिरिक्त मुल्यमा सामान बेच्ने बहाना, मदिरा र अन्य विशेष खाध्यको विक्रीमा वृद्धि, स्टाइलिस ड्रेस र चश्मासहित ढल्कदै मर्कदै हिड्ने अवसर आदी आदी थप केही भए आओस् है हजुरहरु
• चापाचाप पो छ त
• २०६८।१०।०७ । पिकनिक कम यात्रा बढी । स्वस्फूर्त जंगल सफारी । शालीनदीको भिड छिचोलाई । बोझोको शुद्ध स्वाद । सप्लाङदेवी वरपरको सुनसान जंगल । पशुपतीमा बढ्ता भएका मृगलाई त्यही लगेर छोडेर मृग संरक्षित क्षेत्र बनाउन पाएँ वाह । सडकको विस्तारले रौनक थपेछ साँखु सम्म । हिजोको दिन सफल भो ।
• वाह Aabaj Sharma । खुबै मजा आयो । केहि छ तिम्रो भन्नु बाँकी ? मेरी मर्जिको गजबको उदाहरण । आज दिनभरलाई पुग्यो डोज ।
• आज छुट्ला भोलि जुट्ला छुट्छ माया जुट्छ फेरि ।
यो अरूको हैन चासो क्यै छ तिम्रो भन्नु बाँकी ??
• भन्नु भन्यौ गर्नु गर्यौम आखिर के पो बाँकी छ र ?
रन्थनिएको छु त्यसै त्यसै क्यै छ तिम्रो भन्नु बाँकी ??
• २०५३ वा ५४ सालतिरबाट निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको मेरो साहित्यिक नाम "सान्निध्य" का सम्बन्धमा धेरै क्लिकरहरु कन्फ्यूज भएको पाउँछु । कतिपयले त झट्ट हेर्दा र पढ्दा यसमा स्त्रीलिङीको गन्ध पाउनुहुँदो रहेछ सन्ध्याका रुपमा ! फेसबुकले यौटा मात्रै नाम राख्न नदिएका कारण म्याग्दी (मेरो गृह जिल्ला) राख्नुपरेको हो । यसमा थाँतथलोको फैलावट जोडिदाँ राम्रै भएको छ । अरु प्रष्टताका लागि नेपाली शब्दकोशलाई फोटोका रुपमा शेयर गर्नैपर्ने देखियो ।
• अभिव्यक्तिमा प्रष्ट हुँदा र सोचलाई प्रष्ट पार्दा रोचक बन्दो रैछ साधारण कुराहरु पनी
• पद हुँदैमा विवेक हुन्छ भन्ने छैन नै । विवेकशिल प्रयोग नहुने ज्ञानले पद त देला आत्मसम्मान र आदर दिलाउन सक्दैन ।
• आत्मबल गुम्दासाथ खेल खत्तम !
• आफूलाई चिन्ने सबलाई चिन्न सकिदैन
• बन्द थियो अरे तर ढुक्क चल्दैछन् सवारी साधन ! सरकार बलियो भएको कि आयोजक उदार !! - January 17 at 10:19am near Kathmandu
• परिपक्कताको मानक समाज र परिवेश नै त हो आखिर !!
• अनुहार राम्रो हुँदैमा पोजेटिभ हुन सकिदैन !! चेतना भया
• समय अनुसार प्रस्तुत हुने भिन्न अनुहार बोक्छ मान्छे । यहि सत्यलाई अंगालेर आफैलाई उदांगो गरेको मात्रै । तपाईले मेरो कुन चै अनुहार चिन्नुहुँदो रैछ भन्ने जिज्ञासा त छदैछ ।
• पुरै पच्यासी !! यो एक खतरनाक चुनौती - January 11 at 3:48pm near Kathmandu
• कैलेकाहीँ त खुकुलो छोड न होई ए बज्जे !! सधैभरी बाँधिरहने हो त यसैगरी !! एक दिन तैलाई बन्दी बनाउँछु अनी .......।।।
• नेपाल बन्दका बिरुद्धमा साँगितिक मिक्सअप । जसले बनायो । गायो र भिजुलाईज गर्यो । राम्रो गरेछ/गरेछन् ।
• भावक मनहरु मोडलिङमा अभ्यस्त भएजस्तो !! Thanks Cyber world
• अझै पनी कुराउछ््यौा उसैगरी भन्दिम कि क्या हो !!
मेरो सुन्न छाडी बजारको सुन्यौ ।
सिलसिला छोडी हतारको सुन्यौ ।
• अनुकुल आजै छ । शुरु आजैबाट ।
• फेसबुकको दास हैन । फेसबुकमा दं।गदास ।
• जिन्दगीमा सधै दंग आगन्तुक भैरहोस् र हामी त्यही दंगलाई रिझाउन लागीरहन पाऔ
• नयाँ ज्याकेट नल्याइदिए पनी जानेबेला आफ्नो फुकालेर देओस् र साथीहरुमाझ सान बढोस् हे हे
विग्रनुको हद फरक–फरक फरक हुन्छ नै। त्यहि विग्रिएको हदको अर्को पराकाष्ठा कुरुप बन्नु हो। र, यो कुरुपताको यात्रामा मलाई वारम्बार उक्साईरहेको मध्ये एक हो काठमाडौ।
• उक्साहटबाट जोगिदै काठमाडौको पनी नाक जोगाउदै विन विन नै हो नी हुनुपर्ने र गर्ने त ।
• घाम छ । घाम छैन !!! सधै चिसोलाई नखेदने रैछ त्यही घाम ।
संरघर्ष नरोक प्रिया,
आजाद हुन बाँकी छ ।
नछोड बिच बाटोमै,
आवाद हुन बाँकी छ ।
• नाम चलेको र प्रतिष्ठितमा दरिएको कान्तिपुरले आज यसरी लेख्यो "परीक्षक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि २ सय प्रतिशत भत्ता पाउँछन् ।" जबकी सार्वजनिक लेखा समितिको आदेशमा ३५ प्रतिशत अघिल्लो वर्ष र २५ प्रतिशत त्यस अघिको वर्ष गरी जम्माजम्मी दुईपटक प्रोत्साहन भत्ता वितरण भएको हो । यसरी एकाएक भत्ता पाउने भएपछी अब तलव थाप्न कान्तिपुरकै अफिसतिरै जाने पो हो कि त ?
बर्षात हुन बाँकी छ ।
बर्बाद हुन बाँकी छ ।।
• पोखराको पानीको त अनुभव हो नानीको भर अभरको अनुभव साँच्नै बाँकी छ । भत्केको संयम निकै सुहायो ।
• नछोड बिच बाटोमै
• मान्छे धेरै फुर्सद भयो भने कि चै अर्काको कुरा गरेर बस्छ कि त कविता लेख्छ रे ---मेरा एक साथीले भनेका । हो कि क्या हो ?
• पत्थर पनि त पग्लन्छ ताप पुगेपछी !!!
• ज्वालामूखीको नतिजा र पत्रे चट्टानहरुको परिणती पग्लिएकै कारण सम्भव भएको हो ।
• झर्नु मात्रै किन गिर्नु भन्ने शब्द पनि त छ शब्दकोषमा (!)
• ए भन्टाङ्ग भुन्टुङ्ग हो किन लडेको यसरी ! बरु भेटेरै फाईट गरो न । हामी टिकट काटेरै हेरम्ला नि त बरु हि हि हि
• समस्या परे सरकारसँग शरण मागुँला नी हुँदैन !!!
• अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई !!!
• अजब गजबका पात्र भेटिन्छन् फेसबुकमा ।
• Sannidhya Myagdi
• अपनी मर्जी से कहाँ अपनी सफरके हम है
रुख हवाओँका जिधरका है उधरके हम है ।
पेहेले हर चिज थि अपनि मगर अब लगता है
अपनी ही घरमे किसि दसुरे घरके हम है ।
• हर तरफ हर जगह बेसुमार आदमी ।
फिर भी तनहायिओका सिकार आदमी ।
सुबह से शाम तक बोझ उठाता हुवा
अपनी लाशका खुद मजार आदमी ।
• जो भी बुरा भला है, अल्लाह जानता है ।
बन्देके दिलमे क्या है, अल्लाह जानता है ।
ए फर्स वर्स क्या है, अल्लाह जानता है ।
पर्दोमे क्या छिपा है, अल्लाह जानता है ।
Sannidhya Myagdi ‎-----------
किश्मतके नाम को तो सब जानते है लेकिन
किश्मतमे क्या लिखा है, अल्लाह जानता है ।
• चलो बाटलेते है अपनी सजायेँ ।
ना तुम याद आओ ना हम याद आयेँ ।
सभी ने लगाया है चेहेरे पे चेहेरा
किसे याद रखेँ किसे भुल जायेँ ।
• जबसे हम तबाह हो गए
तुम जहाँ पनाह हो गए ।
हुस्न पर निखार आगया
आइने से आह हो गए ।
• मेलोडी उस्तै शब्द उस्तै वाह ।
सुना था कि वो आएँगे अन्जुमनमे, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी
हमे क्या पता थी हमेँ क्या खबर थी, ना ए बात होगी ना ए बात होगी ।
• वाह.....हाँस्न बिर्सेकाहरुलाई
हसके बोला करो बुलाया करो ।
आपका घर है आया जाया करो ।।
मेरी तकदिरमे जलना है तो जलजाउँगा
तेरा वादा तो नहिँ हुँ जो बदलजाउँगा ।।
• हजुरले जानेको र मैले नजानेको बिचमा कहि त सामञ्जस्यता होला !! एक पटक खोजी हेर्नुस् महाशय
• सबै जानेका कुराहरु न भन्न सकिन्छ न सिकाउन सकिन्छ । ग्रहण गर्नेले कसरी लिन्छ त्यो पो मुख्य कुरा हो त !!! बुझाउने कलाले धेरथोर फरक पार्छ नै ।
• कम बोल्ने धेरै सुन्ने - निकासको यौटा उपाय
• कमसेकम आफैप्रति इमान्दार !!
• जे जे गर्छौ गर साथी बकवास चै नगर न होई गाँठे !!!!
गुपचुप हुन्छ शहरमा भाव पोखिएको ।
थाहा पाए खबर गर्नु माया जोखिएको ।
• धेरै बेरसम्म धेरै तापक्रममा पकायो भने सम्भावना हुन्छ अरे किटाणू मर्ने । नत्र सारै ज्याद्रो हुन्छ रे त्यो ।
• गजबका विधानको शैली सधै रुच्छ । पृथक शैलीको मजा विधान सधै दिन्छन । वेल डन विधान श्रेष्ठ ।
• राम्रो र नरम हुन्छु भन्ने भावनामा संशोधन गरौँ कि के हो !! बरु म नराम्रैमा प्यारो थिएँ क्यार
• बेलाबेला आत्मसमिक्षा हुन्छ नै । विनाकारण हुण्डरी चल्छन त्यसैले सधै बुढापाकालाई सम्झन सकिदैन । यो भावनाको उतारचढाव हो ।
• भद्रगोलमा मार्गदर्शनको चाँजो
• उफ्रयो उफ्रयो अनी थच्यो नै हो हजुर । कुहिनाले पहाड फुटाउन सकिदैन थाहा छ नी हजुरलाई ।
• अब झिटिगुन्टा बाँधियो । अबको फिर्ता आगन्तुकको रुपमा मात्रै
हिमालजस्तै देखिने बादलको के काम ??
सद्दे नै बेकार छन् पागलको के काम ??
• कमेन्टहरुलाई सहर्ष स्वीकार नगरेर पूर्वाग्रहको ठप्पा लाउनेहरुले कमेन्टको अपेक्षा नगरेकै राम्रो !!
भत्किसकेको घरको कैयौ गुणा
भत्कदोँ घरले मुटु लछार्छ ।
तिमीले नबुझेर बुझेको कुरा
मैले भनिरहनु परोईन भन्ठानेँ
मैले भुल नगरे तिमी गर्द हौ त ?
म नादान हुन सक्छु
गर्भभित्रै त पक्कै छैन ।
दम्भ जिन्दावाद भन्ने मेरो असन्तुलित साम्राज्य
तर पनी किन म
काल मार्क्स जलाउन नसकेको हुँला ?
• जब कोईलाहरु भुङ्ग्रोमा परिणत हुन्छन् । ठिक त्यतीबेला ढाड चिलाईरहुन र पो यो चिस्यानको स्वाद बढ्थो त !!
• तेरो हक तैलै राख । रिवाज या समाजको नाममा मलाई प्रताडित नगर । सच्चाईको नसिहत दिने सच्चाई सुन्न नसक्ने तेरो सच्चाई तैनै राख ।
• नजिककैले गरेका सानातीना गल्ती त बढी माईना राख्छन् नी हैन । फेसबुकले जानेर नजानेर हामीलाई आफुमा समेटी भ्याएको छ ।
• अर्थबिरामबाट पूर्ण विराम तर्फ.................. अर्थविराम माने आर्थिक रोकावटबाट पूर्णविरामहुँदै अन्यमा
• नबुझ्नेलाई बुझाउनुको र बुझेकालाई अल्मल्याउनुको मजै अलग !! - हामी गजबका हतियार र मतियार हौ नी तमासाका लागी
• सारा मौसम बिरामी छ......
• कठिन छ दुनियाँको तालमा ताल मिलाउन,जान्दिन म नाँच्न कठै ! तान्छन् किन मान्छेहरु ?
• टुपी देखि पाउ सम्म,हुदाहुदै जानकार जाहानेर दुख्छ त्यहि,हान्छन किन मान्छेहरु?
• मन हुरुहुरु । समय खुरुखुरु ।
• जो बित्यो - सो बित्यो.
• म भत्काउँदैछु । उकास्ने नउकास्ने तिम्रो च्वाईस् !!!!
• मानवीय प्रवृत्ति चाहे व्यक्तिगत सिमितता भत्काउने कुरा होस् चाहे विद्यमान बन्धन भत्काउने कुरा होस् सबै सबैमा यो लागू हुन्छ । नेता कलाकार सामान्य मान्छे सबैजना यस्तै प्रवृ्त्ति बोकेर त बाँचिरहेका छौ नी हैन र
• बकवास दुर्घटनाहरु !! तैपनी भाँचिएको छैन । जुर्मुराउने कलिला मुनाहरु त्यही त छन् ।
तिमी लेख्दिनौ म लेख्छु यही फरक छ ।
तिमी देख्दिनौ म देख्छु यही फरक छ ।
• महिलामुक्त क्षेत्र //// कार्यालयहरु//- ठिकठाक । अभाव महशुस भएन । बरु कहिकही राहत नै भयो होला ।
• भगवान छन् अरे !! ए बाबा भएको भए त "हे भगवान" भन्दा "हजुर" भन्दाहुन् । वास्तवमै भगवान भनेकै यौटा मानक हो जहाँ आश्था राखेपछी अरुतिर चाहार्नु जरुरी हुदैन । भगवान हाम्रो निरन्तरको आश्थाका कारण सिर्जना गरेको स्वीकृत भ्रम हो जसलाई हाम्रा संस्कृती परम्परा र पुस्तैनी उपहार मान्न सकिन्छ ।
• मेरो अनुहार नरुच्ने ब्रगेल्ती छन ....त्यो म बरोबर जान्दछु । नाम नै नरुच्ने चै कति होलान् कुन्नी ?
• टुक्रा टुक्रा पारेर सबलाई बाँड्नु भन्दा १३ का बिरुद्ध १४ नै सही ......तलाई न मलाई घ्वाईलाई हा हा हा
• यस्तै छ यहाँको चलन । त्यो माथी पनी तन्नम देशको नियती भनेकै यही त हो नी
• स्थानियताले केही फरक त पार्छ नै । सिन्जाकै सन्तान हुन सबै त्यसैले कहि न कही समानता त छ नै ।
• तुनुनुनु कानको मुनी बजाउँ जस्तो ...........सुहाउने फुर्ती पो लाउनु यार !!!
• नानाकै शैली गर्न सके त काईदा हुन्थ्यो । हि इज जस्ट ग्रेट एक्टर ।
• निम्छरो सरकार ! सहकारीका माध्यमबाट हुँदाखानेलाई सहयोग गर्छु भन्दा पनी गर्न नदिएर हडताल गर्छन मालीकहरु !! मजदुरका बिरुद्धमा मजदुरकै उपयोगको यो काईदा नेपालमै मात्र देख्न पाईन्छ बाबै
• बुझ्ने ठाउँमा छैनन् । नबुझ्नेहरु ठाउँमा छन् । बुझेर पनी बुझपचाउनेहरु छन् त्यही ठाउँमा । नराम्रा मध्येबाटको
• हामी अझै पनी "अमुक व्यक्ती/पात्र" खोज्दै छौ । चाहे त्यो "बाबुराम" होस् या "गोकर्ण" । "सिस्टम" खोज्ने दिन पनी त आउला नी कुनै दिन !!!
• जवाफदेहिता बिनाको शासन गतिलो हुनै सक्दैन । सँगसँगै भुल्नै नहुने कुरा के पनी हो भने हामी आफ्नै सोँच र चिन्तनमा पनी चिरफार जरुरी छ । अगुवाले गरेका कामलाई सजग र सचेतरुपमा खबरदारी गर्ने हैसियत नबनाउँदासम्म सिस्टम बस्दैन । आक्रोशको तारोमा नेताहरु पर्नु जायज छ नै तर आक्रोशको निदान आक्रोश वा बदलाभाव हुन सक्दै सक्दैन ।
• त्यसैले त भन्छन् नी राजनीति समाजको दर्पण हो । हामी राम्रो अरुबाट अपेक्षा गर्छौ या भनौ गरिरहेका छौ । चाहे त्यो म होस् या अरु कुनै । त्रुटी यही छ । अरुबाट भएका राम्रा कामका लागी हामी ताली बजाउन त कन्जुस्याई गरिबस्छौ तर राजनीतिलाई पेशा बनाउनेसँग अपेक्षा राख्न छोड्ने हैसियत पनी राख्दैन । यस्तै भुमरीबाट प्रणाली बस्नै सक्दैन नै ।
• तिमीले गिन्ती गरिरहेका तारा झार्ने प्रयास यत्तिकै त कहाँ छोडुँला र !!!
• उज्यालो आफै भ्रमित छ के पो साहस गर्ला र । ।। दारा हैन खसोखास तारा हो ।
• म सँग छुच्चो मुख लाएर बाउँठिदै २-४ कुरा गरे त्यो मनोकामना पनी पुरा भैहाल्छ । बरु बंगारा सँगै पुरै मुखाकृतिमा भुईचालो गयो भने चै दोष लाउन पाईदैन नी फेरी । हा हा हा
• प्रयासमै त छ सबथोक ।
• फेसबुकलाई कमाउने लहड उल्का लागेछ । विज्ञापनको हेरेसमेन्ट हाकाहाकी भोग्नुपरेपछी यसको प्रयोगमा पुनर्विचार गर्ने दिन शायद छिट्टै आउदैछ ।
• भग्नावशेषमा खोज्दैछु आफ्ना अपेक्षाहरुलाई । खबरदार नलुक्नु है
• लुक्न खोजेकालाई तर्साएको मात्रै । लुक्ने दुस्साहस नगर्नका लागी स्वघोषणा/विगुल फुकिएको मात्रै हो । कहि त्रास छ त्यसैले त खबरदारी गरेको ।
उनै कात्छिन् उनै लाउँछिन् भोट भोटेकी जोई,
सुखीको संसारै आफ्नो, दु:खीको कोई न कोई' --- सुदूरपश्चिममा गाउने देउडा गीतबाट
• फुर्सदको समय अचानक आज Ashank आशांक उपाध्याय को वालमा बिताएँ । गजब रमाएँ । कहीँ कतै छुच्चो बनेँ कहि निकै उदार । तर उहाँकै वालमा केही लेख्न खोज्दा फेसबुकको फिचरले रोकिदियो । म चाहार्दै गएँ उहाँ त्यसलाई फ्लो गरिरहनुभएको कुरा नोटिफिकेसनले जानकारी गराईरहे । पर्दापछाडीबाट सिधै शब्दको संयोजनका बारेमा फिडब्याक पाउनु आधुनिक प्रविधिको गतिलो उपहार त हो नै । साथसाथै त्यसमा पाठक र लेखक दुवैलाई आनन्द समे हुने रहेछ भन्ने अनुभव निकै झांगियो । लेखकिय यात्राका लागी सधै सधै बधाई र शुभकामना ।
• अनियोजीत छान मारेको थिएँ उहाँको वालमा । समय अव्यवस्थामै गुज्रिरहेकाले आउँदा दिनमा कहाँ कसरी पुगिन्छ बेठेगान छ नै ।
• सप्पै निराशाहरुको भर्सेला परोस्
• सपनाहरु निरन्तर बोईङ् चढ्दैछन् !!! आकाशलाई आव्हान !!! ख्याल गर्नु है !
• थाङ्नाजस्ता मनहरु........
• अनुभवबाट सिकाई । असफल हुदै सफल । खेस्रामा केरकार । दिक्दारीबाट निकास । मान्छेहरुको अव्यवस्था । साफीमा समेत प्रयुक्त टिपेक्स । आफ्नै अस्तित्वका लागी ट्याटु सबै सबै रफ नै त हुन् । ढुक्क । निश्चिन्त र गर्विलो यात्राका लागी ख्वै समय हामी कथित मान्छेलाई । सधैको पहरेदार । त्यही त समय रफकपी । झुक्याउछुँ भनेर कस्सियो । चोरको बाउ चन्डाल भएर निस्कन्छ । साला बजिया समय । सधैको यस्तै । सधै लुडीबुडी पार्छ भन्या ।
• यसपाली पनी बिरबलको खिचडी पाकेन .............नजानेरै हो नी । रंग फेर्न बाँकी नै छ । खिचडी नपकाएर सुखै छैन ।
• टुक्रा टुक्रा समय लक्ष्य धमिलो.......... त्यही त गाँस्नु पर्ने हो तर खोई केमिकल कमजोर भएको हो की मौसम बेइमान केही थाहा नै भएन भन्या
• एकथोक र सबथोकमा त केही फरक हुन्छ नै । एकथोक एकथोक जोडेर सबथोक भएपो राम्रो भो त । एकैपटक सबथोक खोज्दा वा बटुल्न खोज्दा त दुर्घटना होला भन्ने चिन्ता जाहेर गरेको
• हिड्न जान्याछैन दौडनको हतार
• मुटु अर्थात संवेदना बोकेपछी दुख यौटा पाटो हो भन्ने विर्सनु चै भएन नै
• मान्छेले जे जानेको छ त्यही गर्छ चाहे बकवास या कर्म .... तिमिले जानेकै बकवास हो त म अरु के अपेक्षा अरुँ । भन्नु परेपछी सोत्तर पर्ने गरी भन्ने चुत्थो आदत के हजुर ।
• स्वभाव भन्दा अस्वभाव मन पराउने पो भइएछ त ............ राजनीति हरेक नेपालीले गर्छ चिया समयदेखी ओछ्यान समयसम्म ।
• अहो सग्लै तिरस्कृत पहाड पो सम्याउनु बाँकी रैछ त !!!
• मेरा हरेक प्रश्न वा जिज्ञासामा हजुरको अनुहार किन भत्कन्छ हँ ??? जे छ त्यही भन्न नसक्दा अनुहार भत्केको पाउँछु के अन्यजनको त्यसैले मात्रै । प्रश्नहरु कतिपय शंका निवारणका लागी पनी हुन्छन नै । हो हो प्रश्न नै बारुद पडकाउने हुन्छन शायद ति दुखी आत्माहरु यत्र तत्र सर्वत्र छन गुरु
• अभाव र समस्याभन्दा गतिला गुरु शायदै भेटिएलान् !! टुप्पी समात्ने भाउजु ल्याउनुपरो । त्यो भन्दा अरुले मार्गनिर्देश गर्लान जस्तो लागेन है उसो भा । त्यो उर्दिका बिरुद्ध क्रान्ति गरुम अनी छिट्टे हाम्रो र राम्रो संसारमा हुत्तिउँ मित्र । उनका पालामा जुँगा नआम्दै ततेरिने अनी हजुरलाई उर्दि कस्नेलाई धुवाँदार विरोध गरेँ है
• बुद्ध कहाँ जन्मेलान ? मनिषाले निर्देशन गरेको फिल्ममा ।
• लिखित संघर्षको समयमा गजलको त्यान्द्रो ज्याद्रो भएर अटेसमटेस भएको थियो त्यतिबेला । आज बल्ल यसो खोस्रिदा फ्याट्ट फेला परेपछी नबाँडिरहन सकिन ।
• घर माथीको काल्नो चै भत्कन सक्छ । पैरो चलेपछी चै सके दुवै भाग्ने नत्र आफु बाँच्ने अरुलाई बचाउन पर्यास गर्ने । त्यो पनी नसके तु मेरे लिए मे तेरे लिए भन्ने मर्ने हा हा हा ।
• गजब लाग्यो । --------केशव जी /// सिर्जना जब आफ्नो हातबाट खुस्कन्छ वा चुहिन्छ आफ्नो पटुकाबाट त्यो सार्वजनिक सम्पत्ती हुन्छ भन्छ्न् बुज्झकीहरु । त्यसैले आफैले यस्तै तयार गर्न नसकेपनी मेरै वालमा किन नराख्नु भनेर राखे । संयोजकको अनुमती बिनै ।
• मन परेपछी आफ्नो बनाउन मन लागीहाल्ने मान्छेको जातको धर्म निभाउदै पाईरेसी बिरुद्धमै उभिएको हुँ । तस्विर सहित सर्जकको सम्पती राखेर ।
• ‎.......कति राम्रो राम्रो । शुरुवात गजब छ । खुट्टा भुइमै थिए र रहन्छन् भविष्यमा पनी । काम खोज्ने र लिने सरकारले काम बराबरको पैसो तिर्नु जायज हो । अझैपनी काम मनग्गे दिने हो भने दोब्बर बनाए पनी सरकार नाफामा जान्छ । ढुक्क हुनुस मित्र
• आग्रह पुर्वाग्रहको कुरै होईन । निजामती सेवा ठुलो पोखरी हो ७५००० स‌ख्याको । असल र खराबहरु यही मध्येकै हुनेहो ।
• परिवर्तन हुँदैछ मित्र । हिड्दै गए अवश्य पुगिन्छ । वर्तमानमा न त पुरै आदर्श काम लाग्छ न त खोक्रो व्यवहारिकता । दुवैको संयोजनबिच बाट समाधान निस्कदै गयो भने हामीले बुझेको नबुझेको कुरा खुल्नेछ नै ।
• हैन इतिहास बनाम्चन कि क्या हो भुत्ते बुढाले !!!
• तिम्रो दिमागमा धमिरा लागेजस्तो छ साथी । बिषादी छर्दा केही हुन्थ्यो की !!!
• ह्य्या...... यी फालाफाल काला मनहरु भन्दा त तिम्रो कालो अनुहार कति ठिक कति ठिक !!!
• नजर सधै बेइमान हुन्छन बहिनी । आफ्नैलाई साथ लगाएर हिड्दा पनी जिब्रो पडकाउन या नजर दौडाउन मन लागिहाल्छ । चाहे त्यो क्षणीक उन्माद या उनलाई जलाउनका लागी गरिएको किन नहोस्
• त्यति मात्रै नभएर मौका बिशेष मनका कुरा नि कतै खोल्न पाइएकै कुरो नि जानकारी दिंदा हुन्छ गुरु! :)
• बोधार्थ दिदाँ सबै स्वीकार्य हुन्छ नी गुरु । गोप्य पत्र लेख्नपो नपाइएला त हा हाहा
• आम्मै नजर लाउन पनी त्यस्तो सिन्डिकेट भो भने त कसरी रमाउनु हउ दुनियाँमा
• फेसबुक --------फासफुस
• Sannidhya Myagdi --------------
झुक्काएर उस्ले अर्कैलाई
मिल्यो जुल्यो रे, म छक्क परेँ !!!
• यु आर गोल्डेन केक एण्ड दि काले इज लक्की बि (माहुरी)---फर माई स्कूल फ्रेन्ड
• गजबको शब्दसंयोजन पाएँ । सिर्जना जब आफ्नो हातबाट खुस्कन्छ वा चुहिन्छ आफ्नो पटुकाबाट त्यो सार्वजनिक सम्पत्ती हुन्छ भन्छ्न् बुज्झकीहरु । त्यसैले आफैले यस्तै तयार गर्न नसकेपनी मेरै वालमा किन नराख्नु भनेर राखे । संयोजकको अनुमती बिनै ।
• राम्रोलाई बजारीकरण गर्नसकेकोमा आफैलाई अनी जिवन खरेललाई बधाई सहीत सबैलाई धन्यवाद । यसमा मैले पनी रुचाएको पक्ष भनेको प्रयोग र स्वव्यंग्य नै हो ।
• सजिलो पो छैन त असम्भव त हैननी बन्धु !!!
• आफ्नाहरु जो नुनुचुक छर्छन् । हि हि हि
• फुकुवा आजदेखी । फुकुवाको कार्यक्रम फिर्ता भो । एभरेष्ट बैकले धोका दियो । खातामा पैसा छ निकाल्न मिल्दैन रे क्या रिलायविलिटी छ यार । हो नी शहरीया बधुवा । शहरी महाजनको चंगुलमा फस्या थे क्या । परिवेश पुरै बन्धनमय न छ हजुर
• राम्रै आँखाले हेर्दिम् न के जान्छ त !!!
• प्यासेन्जर सहित अफिस पो आईयो त । नयाँ अनुभूती ।
• भोली कैलै आउदैन भन्छन् तर भोलीदेखी निन्द्राले दुख पाउने दिन शुर हुने भो त
• माखेसाङ्लोको स्वाद हुँदैछ सुस्त सुस्तऽऽऽऽऽ छ लात्ति नौ घुस्सा नखाई परिपक्क होईन्न अरे बुज्रुकले भन्या
• जताततै भत्काउनेहरु ssss चाहे त्यो भौतिक होस या मानसिक !!!
• भत्काउने अर्थात स्थापित मान्यता/धारण/अवस्था लाई आफ्नो अनुकुल बनाउने प्रयास । यो सकारात्मक पनि हुन्छ नै । जस्तै कुमारीले आफ्नो वैश भत्काउछे अनि नयाँ शुरुवात हुन्छ । नजान्नेले आफ्नो अज्ञानता भत्काउँछ अनी ज्ञानको यात्रामा चल्छ । यस्तै यस्तै । म मझधारमा छु मित्र । अर्थात मैले सो कल्ड नेगेटिभलाई भत्काउने काममा विश्राम लिएको छैन नै ।
• भेजा है गार्डेन और टेन्सन है माली ..................
• आफ्नो सोँचमा सिन्डिकेट लगाउने ........अनि अरुलाई उल्टो सोच्यो अरे ऽऽऽऽऽ गजब छ बा।।।।।
• खुल्ला अहंकार बोक्ने अनी आदर्श डकार्ने ढोंगी नै त हो आखिर शहरको मान्छे !!!
• SSSSस्साला.....हावामै कन्फ्यूजन छ यार !!!
• झिम्क्याउ परेली............नत्र धुलो पर्ला !!!
• सप्पैको नाकैमा रीस छ यार !! हैन यो शहरको हावा नै रक्तचापको कारण हो कि के हो !!!! हि हि हि फेरी नाकको मात्रै तापक्रम बढ्ला नि मेरो !!!
• म रामदेव वा हन्ना हजारे नै हुन त सक्दिन तर कोही पर्दापण भए समर्थन अवश्य गर्ने थिएँ । तर सुनुवाई हुँदो हो कि त !!! उनीहरु अनशन भन्छन म परेँ लगातार अनशन तोडुवा !! ठ्याक्कै फरक दिशाको समर्थन नी भाई
• मलाई थाहा छ तिम्रो यादको साम्राज्य यति सजिलै ढल्नेवाला छैन !!!
• आज टाउको दुखिदिए कमसेकम निदाउने बहाना हुन्थ्यो !! गजब !! आँखा बन्दहुँदा साथ मस्तराम । त्यसैले निन्द्रा सधै मेरो पक्षमा उभिन्छ । यदि माग पुरा भयो र टाउको दुख्यो भने अवश्य । लोकल प्याज नै झ्याम्म ।
• ‎.........कृष्ण बजाउ मुरली !!!
• असन्तुष्ट मन र जनको घेराबन्दी शहरमा ।
• कुरै गर्दा देश बन्छ भने हेरौ हामी पनी !!! सुन्या छु । लभ अर्नेले बन्द गर्ने । केटी पक्षकाले बन्द गर्ने यस्तै यस्तै अनेक छन् ।
• त्यही त अलमल छ ? जिम्मेवारी कस्को ? आदर्श खोक्ने यौटा कुरा भयो र व्यवहार अर्को कुरा !! जान्ने भनाउँदा हामी/अरुहरु सबै कुरै गर्ने काम नगर्ने वा गर्ने वातावरण पाएन भनेर कोकोहोलो मच्चाउने नजान्नेहरु चै मौलाउने !! अल्पमतमा दिमाग र बहुमतमा उरन्ठ्याउला मान्छे र मन भएपछी के लाग्छ भन्नुस त ? त्यसैले कुरै गरेर शुरु गरम भनेको । स्टेटस मार्फत
• सपनाहरुको रेलो छ अँचेल
• सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भएका निजामती कर्मचारीलाई बधाई तथा सम्मान भो -नेपाल सरकारबाट
• चुई चुई चुइकने जुत्ता......न यत्ता न उत्ता
• गायक हुन लायक भए पो !! गुनगुनाएको मात्रै । अनी त्यसपछि ......म्याद थप । तै चुप मै चुप ।
• मन पवित्र छ मामाश्री चिन्ता लिनु पर्दैन नभएर
• एउटै ढुँगामाथी मन्दिर परिषर।।।
• नगर न झरी.....सधै यस्तो मनपरी.....कतिवेला वर्षन्छ ठेगानै भएन के यो झरीको शान्तिनगरमा धुलो गैरीगाउँ जलमग्न ....यस्तो पनि गर्ने हो त ?
• म संवेदनाको हत्या गर्न चाहन्छु !! बरु कति वर्ष जेल भोग्नु पर्छ कुन्नी !! सबैको जग संवेदना नै हो । ना रहे बाज ना रहे बासुरी । पहल मात्रै अरेर भेन केरे जेल रोज्न मात्रै पाएपनी कति हुन्थ्यो । ब्होर्नी नै रहर लाईच्च भने हत्या नै अर्देउ न त खेला खतम ........म भ्यानै घोषणा अरम्ला । मलामी छन् अर्थात संवेदना बाँकी छ नपत्याए संविधान सभा भवन अगाडीका बगालेहरु हेर्नुस न हजुर
• जनताको चश्मा लगाउनुभो जस्तो छ झुक्केर । एकपटक नेताजीको चश्मा लगाएर बिचार गरम न मित्र । यता संवेदना खत्तम उता नजरको घेराउ होला भन्ने डर मात्रै नी हजुर त्यो भन्दा कठोर जेल कहाँ होला र संसारमा !!
• बन्दको दिनमा राजधानी चितवनमा राखौ - छायाँ राज्य सञ्चालन गर्न नी राजधानी नै सरेपछी चितवनमै बसाई भैहाल्छ नि । हामीले गर्ने यस्तै अस्थायी उपचार त हो नी । बेनी राख्यो भने त सरकारी अफिस पनी अट्दैनन् आएका मान्छेलाई रत्नेचौर लैजाने हजुर ?
• सडकैभरी मौसमी प्रहसन !!
• क्या यार प्रश्नकर्ताहरु आफै उत्तर बोकेर हिड्दीने !! उत्तर नखोज्नेले प्र्श्न नगरेकै राम्रो
• केही टुक्रा-केही बिम्ब (फेसबुक स्ट्याटस्)
• ---- हिँड्दा हिँड्दै पाईलाहरु रोकिए पो चिन्ता गर्नु ! खाँदा खाँदै जिब्रो आफ्नै टोकिए पो चिन्ता गर्नु ! ------------ दशै आयो-तिहार आयो, अनी सारा बजार तात्यो । माया लाम्ने बिचार आयो, अनी सारा बजार तात्यो । ------------------ सिक्ने अनी सिकाउने गुरु चेला जिन्दगा...
• ब्लड प्रेसर, माया र तिते करेली !!!
• पुस्तैनी संक्रमणकाल !!! हामी भन्दा पनी हाम्रै भूतहरु चै द्न्द्व लगायत सम्पूर्ण संक्रमण व्यवस्थापनमा माहिर हुने छाँटकाँट छ ....धन्य हामीहरु
• सामुहिक मजाक-बन्द
• परिचय माग्ने अनि विश्वासका कुरा गर्ने !!! मानवीय स्वभावको कुरा गरेको
• उधिनेको उधिन्यै तर सिङ् तिखारीएला भन्दा मठ्ठिदै पो गा"छ त !!
टुक्रा टुक्रा जोड्नु अनी कथा बन्छ ।
टुक्रा टुक्रा सोध्नु अनी व्यथा बन्छ ।
• ‎"तोरी" होस् कि "तोरीको साग" मेरो लागी केवल खानासँग खाने जिनिस पो हो त !!
• ओशो रजनीशले एक ठाउँमा मार्क्सवादसम्मत कुरा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'मेरा किताब कुनै दिन शास्त्र बने तिनलाई जलाइदिनू। शास्त्र मानिसको ज्ञान खोजीको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो।' मार्क्सको आदर्श वाक्य थियो, 'सबै कुरामा शंका गर।' अर्थात् मार्क्सवादमाथि पनि शंका गर। शास्त्रले शंका गर भन्दैन, आँखा चिम्लेर विश्वास गर भन्छ। --नागरीक
• ‎'यहाँ त्यतिखेर कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चलेकाले म कम्युनिस्ट भएँ, टेररिस्ट मुभमेन्ट चलेको भए म टेररिस्ट हुन्थेँ।' -भूपि शेरचन
लेनिन जब शक्तिको चरम चुलीमा थिए, भिरुंगी सल्केका वेश्याहरुले उनलाई आग्रह गरेका थिए रे, 'महान् लेनिन, हामी पनि क्रान्तिमा योगदान गर्न चाहन्छौँ।'
• जताततै संक्रमणकाल छ । परिणाम जे पनी हुन सक्छ, सु:खद या दु:खद् !! त्यही ऋण्मा पनी शर्त लगाउछन् दाताहरुले अनी झन संक्रमणकाल उखरमाउलो बन्छ फेरी
धेरैपछी भेट् भो, भन- घरजम कहाँ गर्यौय ?
दुख्छ भन्थ्यौ भित्र भत्रै, मल्हम कहाँ गर्यौँ ?
• सेतो भन्दा कालोको छ शहरमा भाउ चर्को...............
• केहीबेर फूलको सौन्दर्यमा रमाउन मन भो
• रुनेहरु हाँस्न सिक अब हाँस्ने पालो तिम्रो........
• नमिलेको हो कि मिलाउन नजानेको हँ !!!
• यत्र तत्र सर्वत्र उदेक । थाँती राखेका काम अनेक ।
• रुदैछ आकाश तर म जान्दिन फकाउन..... अब टुलुटुलु हेरीरहनु बाहेक केही गर्न सकिएला र !!!
सिक्ने अनी सिकाउने गुरु चेला जिन्दगानी ।
केही सिक्यो केही विर्स्यो झैझमेला जिन्दगानी ।
फाटेको लुगा, फाटेको जीवन, सिउनुको मजा आयो ।
हारेको जुवा, मातेको यौवन, पिउनुको मजा आयो ।
• यता हेर्योM उता हेर्योव जताततै हल्लाहरु !!
• सम्मूर्ण सुभेच्छुकहरुमा मेरो आभार । र भन्नै पर्ने कुरा ग्लोबल क्यालेन्डरले हाम्रो क्यालेन्डरलाई छायाँमा पारेको कारण मेरो जन्मदिन समेत सुल्टो गती प्राप्त गरेको चै पक्कै हो । खैर त्यसले तात्विक भिन्नता चै पार्दैन नै !!
• खुराक प्रशस्त छन् फेसबुक र नेटवर्कमा अँचेल । शायद गजलै गजल पस्केर फेसबुक अत्याचार गर्दैछ म माथी !!!
• हसकर मिले कोही तो मिलो उससे टुटकर
ऐसी घडीमे दिल ना किसिका दुखाइए
क्या क्या कहेंगे लोग उसे भूलजाइए....
अपना कोही मिले तो गले से लगाइए
पेहेले नजर मिलाइए फिर दिल मिलाइए
मिलजाए दिल से दिल तो गले लगाइए
अभाव थियो जिन्दगीमा तिमी आयौ पुरा भयो ।
नकाब थियो जिन्दगीमा तिमी आयौ खुला भयो ।
• अभाव पुरा भो पो भन्या त हजुर सबै अभाव सकिए भने त जिउनुको बहाना नै सकिएला नी हैन र । नकाव खोल्ने अर्थात लुकेका इच्छा अपेक्षा चाहना थिए सतहमा आए भन्या मात्रै । यसलाई साहित्यिक रुपमै बुझौ न मित्र
आधा देखेँ, आधा छेक्यो, पापी डाँडाले !
माया देखेँ, बाधा देख्यो, पापी मायाले !
• कतै यी हस्तरेखाहरु द्यौतालाई बोर लाग्या बेला कोरिएका त हैनन् !!
• टेबलमा केही पेपर भेटेँ भने र हातमा कलम आईपुग्यो भने मैले त्यो पेपरलाई केरमेट पारेर विरुप पार्न सोचिरहनै पर्दैन । यस्तै सन्दर्भमा देउतालाई पनी केरमेट गर्न मन लागेर यस्तो भयो होला भन्ने ख्याल आएकोले मात्रै हो । निराशा होइन है हजुरहरु
• रुख ढल्यो तर आवाज आएन !!
• ""बिम्बहरु त्यो पनी जटिल । शायद म..."
• छ्‌या के भा यो दिमाग/मन यस्तो !!!! रक्सी सिद्दिएको भट्टी जस्तै !!
• "शालीन तथानाम मौजीहरुलाई ।"
• मेरा शब्द संयोजनहरु मेरा नोट अनी फोटो गजलमा उपलब्ध छन् मित्र ।
• अध्यारो र उज्यालो, मिलन र विछोड, दुख र सुख, उकाली र ओराली, राम्रो र नराम्रो, सफलता र असफलता, प्राप्ती र त्याग आदीको समिश्रण नै जीवन चक्र भएकोले औसी र पूर्णेको कुरा गरेको मात्रै त्यसमा आफ्नो कोही विशेष नपर्ने कुरै भएन
• सिहंदरवारमा काकाकुल भएर बसेको यही आँखाहरुले देखिरहेका छन अनी कसरी अधैर्य हुनुभो भनेर आफैलाई तथानाम ढाँटु मैले ?
• लाँकुरीभञ्ज्याङ् वाह !!! तस्वीर र भिडियो अनी रचनाहरु !! पर्खनुको अर्को विकल्प भएन ।
• "गतिलो शब्दखेल"
• यताको उता उताको यता । न यत्ता न उत्ता ।
म हुँ एक, कमिला शहरको ।
बात गरौ, अमिला शहरको ।
कालो मन-दुषित अनुहार,
कृत्य धेरै, धमिला शहरको ।
करनी होइन कथनी चल्छ,
कुरा मात्रै, गमिला शहरको ।
• रामेश रायनको गीत याद आयो विष्णुजी र कार्कीजीको कमेन्ट पढ्दा । गीतले भन्छ जीवन संघर्ष हो संघर्ष हो जीवन । जिवनदेखी हारेर मर्छु नभन । जिवनदेखी हारेर बस्छु नभन । आदी आदी । अर्थाती सन्देश गीतको यत्ती हो की जीवनलाई बोझका रुपमा लिइनु हुदैन र परिस्थितीलाई त्यसरी नै सामना गर्नु पर्छ जसरी आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउछ । त्यसैले साथी हाँसोको प्रसंग पनी सबैमा एउटै तहमा लागु नहुन सक्छ । मान्छे अनुसार यौटा जोकको असर त फरक पर्छ भने समग्र खुशी र हाँसोलाई लिने कोण अलग हुनु नौलो होईन नै । हाँसो खोज्ने काम कमसेकम छोड्नु भएन भन्ने आग्रह हो । म पनी त्यसैको पर्खाई र अड्याईमा छु ।
• खुद्रा बिचार बोक्ने अनी थोक हल्ला गर्ने ??? यो त भएन नी !!!
• अरुका कमेन्ट पढिसकेपछि कमेन्ट गर्दाखेरी शायद मौलिकता बिच्किन्छ होला आफ्नो कमेन्टबाट है !!
• हिँड्दा हिँड्दै बाटो भुले दोष दिनु मेरो यादलाई !!
• नपिलाउ अरु धेरै मातेको छु पैलैदेखी...........
• अफिसमा पिलाउने सयौ छन् । निराशा र कुण्ठाका घैलाहरु यत्रतत्र छन् नी हैन र ?
बादलसँग जूनको झै तिम्रो मेरो लुकामारी ।
संगीतसँग धूनको झै तिम्रो मेरो लुकामारी ।
• सिक्नुमा भन्दा सिकाउनु मै मजा मान्छौ हामीहरु !!! जान्दिन भन्दा धेरैबेर सोच्छौ !! अरुलाई कम सुन्छौ आफ्नो बढी सुनाउँछौ !! अरुको दु:खलाई तिल देख्छौ र आफ्नो पहाड !!! अरुको गल्तीमा हुर्मत काढ्छौ र आफ्नोलाई ढाकछोप !!!
• लफडा-कचडा जिन्दगी (गजल)
• जिन्दगी यो साला, कचडा उस्तै छ । त्यही माथी सारा, लफडा उस्तै छ । शत्रु भन्दा गार्ह्रो मित्रसँग भयो, अवरोध यो ताजा, खडा उस्तै छ । तिमी भए साथ संसार जित्छु म, घमण्ड यो जिउँदो, कडा उस्तै छ । सिक्दैछु पिउँन जिन्दगी र माया, नबुझने यो प्यास, बडा उस्तै छ ।...
जिन्दगी यो साला, कचडा उस्तै छ ।
त्यही माथी सारा, लफडा उस्तै छ ।
• शहरको चिरफार सकिएको छैन । शहरकै शेरोफेरोमा गजलको नाउँ चलाउने प्रयास जारी छ र रहनेछ । तगडा राख्ने ध्याउन्नले झगडा राख्न दिएन । रिजालजीको कपडालाई प्रयोग गर्न खोजे पनी असफल भएको हुँ गजलमा । सिताजीको बखडा दिमागमा आएको थियो तर शब्दकोशमा नअटाएको जस्तो लागेकोले राख्न सकिन ।
• उर्जा बोक्न छाड्दाकै बखत बुर्जुवा होइन्छ होला है !!
• भुइचालोको खेती गर्न मिल्ने भए काठमाडौमा नै गर्ने थे सबसे पैला
• प्रतिक्रियाहरुले झनै हौस्याए भुइचालोको खेती गर्नका लागी त्यसैले सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद । साँचो कुरा के भने म पनी काठमाडौलाई माया गर्छु र यसको गतिलो स्थिती हेर्न चाहन्छु । उथलपुथल पछि आउने अर्को लहरले काठमाडौलाई व्यवस्थित गराउला कि भन्ने लाग्या मात्र हो कुनै दुराशय राखेको होइन काठमाडौप्रति ।
• "इजलाश चल्दै गरोस् यसैगरी ।..." "अपढेँ । अबुझेँ । अकमेन्ट मारेँ
• सान्निध्यको अभाब खड्केकै हो त यो मुहार पुस्तिकालाइ.....
पुस्तौ पुग्ने भरमार दोष छ शहरमा ।
हुर्कदो नपुंसक आक्रोश छ शहरमा ।
उज्यालोको अर्थ अब फेर्नुपर्ने भयो
चम्किएको सूर्य बेहोश छ शहरमा ।
उनको वैशसँगै चम्किएको अन्धकार
चर्कै भएपनी खोसाखोस छ शहरमा ।
रातको ८:०८ बजे
• हो, अँचेल म कही छैन । उपस्थिती जहिकहि एकदमै न्यून र त्याज्य हुँदै पो छ त । म आफै छकमन्न छु ।
• समय व्यवस्थापन नपुग्या मात्रै हो शायद । अन्यथा लिनुपर्ने देख्दिन केही ! जती गरेपनी तिमीजती हुन सकिएन र पो मार्योन त हउ !!!
• यही देश र यही खाल्डोमै छु हजुर ।
• भेटघाट अरु मिठा बनाउनका लागी शायद । यो प्रविधीको मारमा परेको मित्रता भएर हो शायद । बिजुली चाहिने नेट चाहिने अनी समय चाहिने । केवल मन भएर नपुग्ने भएर हो की सीता जी ??
• आफ्नो मन पर्ने मान्छेको खराब बानी जब मन पर्छ नी त्यसको बखान फुर्सदमा गरौला नी हा हा हा
• माया लगातार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पो त !!!
• जन्मदिन अनी राम्रा रचना दुवैको कामनाका
• म नेपाली पात्रो अनुसार भोली मात्रै एक वर्ष बुढो हुँदै छु । जे होस शुभकामनाका लागि धन्यवाद ।
• यो झन्डै शब्द नै सारो खतरनाक के । जे होस पोज चै झन्डै नभएर साच्चैको हो । मुडको कुरै नगरौ म्याडम जि । पुरै मुडमा छु आज ।
• वास्तवमा सर भुत केवल हाम्रो दिमागी चर्तिकला मात्रै हो । दिमागले बेलाबेला रंगशाला बन्न खोज्दा त्यस्तो भएको हो । समयसंगै दिमागमा रहेका स्मृर्तिहरु एकत्रित हुने प्रक्रिया मात्रै हो भन्ने लाग्छ मलाइ । तपाइको कामना तपाइ मात्रै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।
• मैले मानिदिएँ लौ जा । जे पर्ला पर्ला । हा हा हा
• त्यस्तो धेरै हामीहरु गर्छौ । कहिले बाध्यता हुन्छ । कहिले रहर हुन्छ । थाहा पाएको जानकारी दिदाँको पिडा भन्दा थाहा नपाएझै गरिदिएपछी खुशी भैटोपल्नेहरु धेरै छौ हामीबीच । प्रेमको कुरा गर्ने हो भने कही न कही गुमाउन नचाहने लालसा हो भने अन्य व्यवहारमा चै एउटै घटनालाइ सम्बन्ध तोडने हतियार वा मतियार किन बनाउनु भन्ने शुभ इच्छा हो जस्तो लाग्छ मलाइ । तपाइलाइ कस्तो लाग्छ कु्न्नी थाहा भएन ।
• म भन्दा कैयौ गुना राम्रो त्यही लाग्यो अनी के गर्नु त । म भन्दा त्यै राम्रो छैन त ?
• ख्वै अब त आशा गर्नु नै बेकार हो की भन्नु पर्यो । म पनि झण्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा नै छु ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 11:34:00 AM2comments:
चौध गते ।
त्यसो त मन खाएको मान्छेलाई आफ्ना कुरा भन्न कुनै साईत चाहिदैन । तर बदिलिएको आधुनिक परिवेशमा विशेषत तरुण मनहरुलाई प्रणय दिवसको आफ्नै चटारो छ नै । यसै मेसोमा तिनै मनहरुलाई उक्साउने गरी संयोजन भयो यो गजल । प्रणय दिवसबाट अपेक्षा राख्नेहरुलाई यो समय यो मौसम फलदायी रहोस् । अग्रिम शुभकामना ।
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 11:13:00 AM No comments: